Dictionary များ စုစည်းမူ ~ မင်းသားချေ(နည်းပညာမှတ်စု)
Dictionary များ စုစည်းမူ
ကျွန်တော် ဒီနေ့က စပီး စာပြန်ရေးနိင်ပါပီ ကျွန်တော်ဖိုရမ်မှာ စာမရေးနိင်တာ တလ ကျော်လောက်ဖြစ် သွားတယ်။ စာမေးပွဲကြီး ဖြေရတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာတွေရော အကြွေးကျန်တဲ့ စာတွေရောနဲ့ လုံးလည်လိုက်သွားတယ်။ ဒီလိုတွေကြောင့် ကျွန်တော် ဖိုရမ်မှာ စာရေးဖို့ အချိန်မပေးနိင်ခဲ့တာကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် စာပြန်ရေးဖို့ အရှိန်ပြန်ယူဖို့ ကြိုးစားဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တော့ ဒါလေးကို တွေးမိတာနဲ့ ဒီ ပို့စ်ကို ကျွန်တော် အစပြုပီး ပြန်တင်ပေးပါတော့မယ် နောက်ရက်တွေမှာလည်း ကျွန်တော် တက်သလောက် သိသလောက် လေ့လာမိသလောက် မျှဝေပေးသွားဖို့ ကြိုးစားသွားပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်ရပ်တည်နေတဲ့ ဘ၀တခုမှာ ဘာပဲ့ ပြောပြော ပညာရပ်တခုကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာလို လေ့လာရတာ အရမ်းနည်းတယ် ။ တိတိကျကျ ရေးသားပြောဆို နိင်ကြတယ်ဆိုတာလည်း အတော့်ကိုရှားပါတယ်။ နည်းပညာဘက်မှာလေ့လာလိုက်စားနေသူတွေ အများကြီးလည်းရှိပါတယ်။့ ဒါပေ့မယ် တော်ယုံ အချိန်ပေးပီး အနှစ်ကျကျ အတိအကျ ဘယ်သူ့မှ အချိန်ပေးပီး အကုန်လုံးလိုက်မပြောပေးနိင်ကြဘူး။ ဒါပေ့မယ် English ဘာသာနဲ့ လေ့လာရတဲ့ ဖိုရမ်တွေ ဆိုဒ်တွေမှာတော့နည်းနည်း စာဖတ်အားပိုကောင်းရင် ကောင်းသလောက် အနှစ်သာရတွေ ကို ရပါတယ်။ ဒီချိန်စာဖတ်ရတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံတွေကြရတယ်။။ မြန်မာ ဖိုရမ်တွေ အများစုမှာလည်း မြန်မာလိုတွေ ရေးပီးနည်းပညာကို အကောင်းဆုံးမျှဝေရေးသားနေကြတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ထွက်လာတဲ့ နည်းပညာတိုင်းကိုတော့ အကုန်လိုက်ပီး မရေးပေးနိင်ကြဘူး။ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင် လေ့လာဖြစ်ဖို့ အဓိက ထား ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း ကျွန်တော့ရဲ့ ပို့စ်လေးကို အစပြုပါရစေ…
ကျွန်တော် English ဘာသာစကားကို လေ့လာကာကျရင် အထောက်အကူပြုနိင်တဲ့ Dictionary တွေနဲ့ နောက်ထပ် မိမိ ကိုယ်တိုင် သိထားသင့်တဲ့ စကားလုံးတွေကို လေ့လာဖို့ရယ် . အဆင်ပြေနိင်မယ့် သင့်တော်မယ့် Dictionary တွေကို ကျွန်တော် တင်ပေးပါ့မယ်။ အကို အစ်မတို့ ဆီမှာလည်း Dictionary ကောင်းတွေ အဆင်ပြေနိင်မယ့် Dictionary တွေရှိရင် မျှဝေပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ။ တစုတစည်းတည်းလည်း ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
1။ ။ Babylon 9.0 နှင့် (Offline Wiki + Picture Dictionary )
ကျွန်တော် ဒီဘေဘီလုံကို ကိုကျော်ဇင်သန့် တင်ပေးထားတာ ကိုလည်းတွေ့ပါတယ်။ တစုတစည်းတည်းလည်းဖြစ်အောင်လို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ အထဲ့မှာ Offiline မှာ ဖတ်လိုရ နားလည်ရလွယ်အောင် ဖတ်နိင်တဲ့ English to English တွေ အပြင် Offline Wiki ပါ ပါပါတယ်။ တကယ်ကို လိုအပ်သလို သုံးလို့ရအောင်လို့ ကျွန်တော် ရှာပီး သုံးခဲ့တာပါ။ အင်တာနက် အမြဲတမ်း မရနိင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် Wiki ကို Offiline အတွက် သေချာ ရှာထားတာပါ။ Picture Dictionary ကတော့ ကျွန်တော် တကယ်လည်းကြိုက်ပါတယ်။ ပုံတွေမှာ Labels တွေနဲ့ အစိတ်အပိုင်း တပိုင်းချင်းဆီကို သူက စာသေချာထိုးပြထားပီး Offline မှာလည်း အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ Dictionary ပါ။ သူ့ကို့ပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မိမိ လေ့လာချင်တဲ့ ဘာသာကို Offiline မှာလေ့လာလို့ ရအောင် English to ( ဘာသာပေါင်းများစွာ) ကို ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Babylon 9.0 + patch
Offline Language and Other Dictionary
2.။ ။English to Myanmar (PDF စုစည်းမူ)
ဒီနေရာလေးမှာတော့ ကျွန်တော် PDF တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ အဓိပါယ်တွေနဲ့ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ တွေ ပါဋိ ကို English လို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတာတွေအပြင် မြန်မာ နိင်ငံ သမိုင်းကို English လိုရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါပါတယ်။ နောက်ထပ်ကတော့ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ် တခုက ထုတ်တဲ့ စာအုပ်တအုပ်ပါပါတယ်။ သူက ရုံးမှာဆိုလည်း ရုံးမှာ လမ်းမှာဆိုလည်း လမ်းမှာEnglish စကားကို ဘယ်လိုပြောရမယ် ဘယ်လို အသုံးအနုန်းတွေ သုံးရမယ်ဆိုတာကို ပုံတွေနဲ့ အတူ ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ သူကတော့ Oxford_Dictonary စာအုပ်ပါ။ သူ့ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ပြစ်မူဆိုင်ရာ အဘိဓါန် အပြင် မြန်မာ ပါဋိ ကနေ English တို့ပါပါတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ယူထားဖို့ ဆောင်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
3.။ ။မြန်မာ အဘိဓါန် အဖွဲ့ က ထုတ်တဲ့ Dictionary CD
ဒါလေးကတော့ တကယ်ကို ကောင်းတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စာလုံးပေါင်း 36000 ကျော်ပါပါတယ်။ ဒီအထဲ့မှာ သူအတွက်ရေးထားတဲ့ Kanana fonts ပါ ပါပီးသားပါ။ သူ့ကို CD ရိုက်ပီး အသုံးပြုလို့ ရသလို အဲ့လို့ မသုံးချင်ရင်လည်း vitrual drive ကို သုံးပီး Mount လုပ်ပီး အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ရမ်းပီးကာကျရင် ISO ကို vitrual drive နဲ့ Mount လုပ်ထားမှ ရပါမယ်။ CD ရိုက်ပီး အသုံးပြုတာဆိုရင်တော့ မလိုပါဘူး။ CD ထည့်ထားရုံပါပဲ။ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ Ifile နဲ့ပဲ့ တင်ထားပေးတာကို နောက်ထပ်လင့်ထပ်ဖြည့်ပေးပါ့မယ်။
4။ ။Microsoft Computer Dictionary
ဒီ စာအုပ်လေးကိုတော့ ကျွန်တော် အရင်က Edition 1 .. ကနေစပီး အသုံးပြုခဲ့ဘူးတယ်။ တကယ်လည်းကောင်းတယ် ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ အဘိဓါန်မှာ ရှာလို့ မရတာတွေ ကို ဒီစာအုပ်ထဲ့မှာ ရှာကြည့်ရင် တော်တော်လေး မြန်မြန်ဆန်ဆန်တွေ့နိင်တယ် မပါဝင်လာတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာလုံးတွေဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတယ်။ သိပ်ကောင်းတယ် နားလည်လွယ်အောင်လည်း စာအရေးအသားတွေ အသေချာရေးထားတယ်။Mb လည်းနည်းတော့ ဆောင်ထားဖို့ လက်မတွန့်စေချင်ဘူး။
Oxford_Dictonary နဲ့ Wiki က ကျွန်တော့ရဲ့ အသည်းစွဲ ဆိုရင် ကျွန်တော် တရားမလွန်လောက်ပါဘူး။ပီးတော့ အသုံးပြုရတာလည်းလွယ်တယ် ဥပမာပုံလေးကိုကြည့်လိုက် ဒါဆိုနားလည်သွားမှာပဲ့။
စာလုံးတလုံးကို ရှာလိုက်ရင် Noun / Verb ခွဲပေးထားတဲ့ အပြင် နားလည်လွယ်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ သူ့ကို ဒေါင်းပီးရင် ဒီတိုင်းrar ဖြစ်ပီး သုံးရုံပါပဲ့။
6။ ။Portable Myanmar-English Dictionary By catman
ဒါကတော့ ပေါ်တေဘယ်ပေါ့ မရမ်းသုံးချင်တဲ့ အကို အစ်မတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပီး ကျွန်တော် ထည့်ပေးလိုက်တာ အတော်များများတော့ ပါပါတယ် မြန်မာ ကနေ Eng ဆိုတော့ ပိုပီး အဆင်ပြေမယ်လည်းထင်တယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စကားလုံးတခုကို အစ စကားလုံးတခုလောက်ရိုက်လိုက်၇င် တန်းစီပီး ကျလာတာဆိုတော့ အဲ့ထဲ့မှာ ရှာပေါ့ ပီးရင် ကျက်မှတ်လိုက်ယုံပဲ့ ။
ဒီကောင်လေးကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Unicode Myanmar3ကို ရမ်းပေးထားရမယ်။ ဒါမှ အဆင်ပြေမယ် ။ MM3ကို လည်း ရှာစရာမလိုအောင် တခါတည်း rar ဖိုင်ထဲ့မှာပဲ့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အောက်မှာပဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချပီး ရမ်းသုံးကြည့်ပါ။
8။ ။ writing to speak
ဒီဟာလေးကတော့ စာလုံးတလုံးကို အသံထွက် ဖတ်တဲ့ အခါမှာ တခါတလေ အတွေးတွေက ငါ့ ထွက်ဖတ်တာ မှားလားမှန်လား နီးစပ်လားဆိုပီး စမ်းသပ်ပီး အသုံးပြုလို့ရတယ် ဘာမှ ရမ်းစရာမလိုပါဘူး။ ဒီကောင်လေးထဲ့မှာပါတဲ့ ဖိုင်လေးကို D-click ပေးပီး ကိုယ် အသံထွက် ဖတ်ရခက်နေတဲ့ စာလုံးကို ရိုက်ပီး Enter ခေါက်လိုက်ယုံပဲ့ ဒါဆို သူက အသံထွက်ပီး ဖတ်ပြတယ်။ နားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ် ။
9။ ။ ၂၄ ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာသို့….
ဒါကတော့ အင်တာနက် ရတဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေဆုံးဆိုဒ်တဆိုဒ်ပါ ။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် ၂၄ ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်ဆိုထားလို့ပါ။ အကိုအစ်မတို့လည်း သွားကြည့်ကြည့်ပါ။ သူ့ကတော့ English ကို အခြေခံပီး Google Translate နဲ့ချိတ်ထားတာပါ။ သူ့မှာ စာပိုဒ်လိုက်ပါ ရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ တလုံးချင်းကို ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ။ သုံးကြည့်ဖို့ရယ် သွားကြည့်ဖို့ရယ်ကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးကို တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင် ရယ် နောက်ထပ် အကိုအစ်မများမှာရှိတဲ့ Dictionary ကို တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်လူငယ်တွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ တနေရာတည်းကနေ ရသွားနိင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒီနေ့က စပီး ကျွန်တော် နည်းပညာပိုင်းကို ပြန်ပီး ခြေဦးလှည့်ပါဦးမယ်။ စာမေးပွဲလည်းပီးပီမို့ ရင်အေးနေပီ။ အားလုံး မိသားစု အပေါင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင် အေးချမ်းသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း……
မင်းသားချေ arakantharchay at 9:29 AM
Windows 8 အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Windows RT ဆိုတာ ဘာလဲ
Andriod ဖုန်း တွေကို zawgyi မြန်မာစာ ထည့်နည်းအလွယ်...
မြန်မာ ကွန်ပျူတာ E-books နှစ်ရာ
Andriod ကို ဘာကြောင့် root လုပ်ရသလဲ
Android ဖုန်း Driver များ
ဘယ် Andorid ကိုမဆိုမြန်မာလိုပြောင်းပစ်မယ် (မြန်မာ ...
Android ဖုန်းဆော့ဝဲတွေကုို မြန်မာစာ နဲ့ပြောင်းသု...
Zawgyi-One for Samsung Galaxy Phones
Android ဖုန်း Custom Rom တင်သင့် ? မတင်သင့် ?
GSM အမျိုးအစား Android ဖုန်းများတွင် 3G Internet ...
ဖုန်းပျောက်ခဲ့ ရင်တည်နေရာပြဆော့ ဝဲလေးပါ
ဖိုတိုရှော့ နည်းပညာစာအုပ်များစုစည်းမှု့ 
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ် စာအုပ်လေးပါ လိုချင်ရင်ဒေါင်းသွာြး...
ဖုန်းထဲသို့ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးထည့် နည်း
ကို့ကွန်ပျူတာမှာ မ၀င်စေချင်တဲ့ ဆိုက်တွေကို ဘယ်လိုပ...
PC Auto Shutdown v5.2 Incl Keygen
Internet traffic တွေကို ပိတ်ဆို့တဲ့ နည်းလမ်းအများ
( mp3 player )ပြုလုပ်ပုံနည်း
BLOG HTML ကုတ်များ